access_time २९ कार्तिक २०७५, 11:14 am
रुपन्देही– गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको भवन बनाउन आवश्यक १२ बिघा जग्गा तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्रदान गर्ने भएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका र अस्पताल संचालक समितिबीच भएको छलफलमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले अस्पतालको भवन निर्माणको लागि जग्गा दिन आफूहरु…
नेपालकै जडीबुटी प्रयोग गरि माया देवी मोक्तान बनाइन् क्यान्सर, सुगर,…
access_time २८ असार २०७५, 6:02 am
भक्तपुर। एलोपेथिक औषधिको प्रयोगदर बढेपनि मान्छेहरुमा आयुर्वेदिक औषधि र उपचार विधिप्रतिको विश्वासमा अझै कमी देखिएको छैन् । शहर होस या गाँउ अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरु सानातिना स्वास्थ्य समस्यामा सकेसम्म आयुर्वेदिक उपचारबाट निको पार्ने प्रयासमा हुन्छन्।…
के तपाईको हत्केलामा पनि यी ५ चिन्ह छ ? जान्नुहोस्…
access_time १० बैशाख २०७५, 4:24 am
एजेन्सी । भनिन्छ समुन्द्र शास्त्रका अनुसार हरेक ब्यक्तिको हत्केलामा ब्यक्तिको पुरै जिन्दगीको लेखा–जोखा हुन्छ । यसलाई ब्रम्हा लेख पनि भनिन्छ ।जन्मको समय थाहा नभएपनि हत्केलालाई जन्मपत्रिका मान्ने समेत चलन छ ।हत्केलामा रहेका कैयौं रेखालाई समुन्द्र…
डा. राजेन्द्र भद्रा ! गर्भ नरहने गरि यौन सम्पर्क गर्न…
access_time १० बैशाख २०७५, 4:21 am
-डा. राजेन्द्र भद्रा म २२ वर्षीया विवाहित महिला हुँ। मेरो विवाह भएको तीन वर्ष भयो। सुरुमा सन्तानको चाहना नभए पनि हाल हामीले सन्तान खोजेका छौं, तर हालसम्म मेरो गर्भ रहेको छैन। कतै मेरो गर्भ नरहने…
के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? यसमा के-के जाँच गरिन्छ? कुन…
access_time १० बैशाख २०७५, 3:48 am
के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? यसमा के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस र अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस नेपाली समाजमा बिरामी नभई स्वास्थ्य जाच नगर्ने प्रचलन छ तर हिजोआज जनमानसमा स्वास्थ्यप्रतिको सजगता…